Ny reducer hafainganana dia mazàna tsotra. Fiaran-dalamby tsotra fotsiny eo anelanelan'ny motera sy ny masinina izay matetika ampiasaina amin'ny fampihenana ny hafainganam-pandeha ampitana ny herinaratra. Ny reducer hafainganana, fantatra koa amin'ny anarana hoe reducer gear, dia fitaovana mekanika ary ampiasaina amin'ny ankapobeny ho an'ny tanjona roa.
Ny fampiasana tena ilaina an'ity fitaovana mekanika ity dia ny famerenana ny refin'ny herinaratra vokarin'ny loharanom-pahefana fampahalalana ho fanitarana ny refin'ny asa azo ampiasaina. Mety ny mahita a mpanamboatra manam-pahaizana manokana momba ny fitaovana sy ny boaty ary ny fihenan-tsolika haingana hahazoana ny vokatra tsara kalitao indrindra. Ity ambany ity dia hizara zavatra manan-danja momba ny reducer hafainganana izay tokony ho fantatrao.
1. Fampiharana an'ny reducers hafainganana
Ny reducers hafainganana dia matetika ampiasaina amin'ny fampiasana milina indostrialy sy isan-tokantrano izay mila mampihena ny hafainganan'ny motera elektrika amin'ny fomba mahomby sy azo antoka. Manampy amin'ny fanitsiana ny hafainganam-pandehan'ny motera amin'ny fanomezana torsi ilaina amin'ny milina mba hiasa mety.
Hatramin'ny rafitra fandefasana dia miavaka izy ireo noho ny fahasarotany, miaraka amina rafitra reducer hafainganana hafainganam-pandeha misy miankina amin'ny takiana ary koa ny mari-pahaizana momba ny fampiharana.
2. Ireo singa mamorona reducer hafainganana
Misy singa vitsivitsy izay manoratra reducer hafainganana, anisan'izany ny:
Ny hevitra momba ny torolàlana
Ity dia hery mihodina izay aseho amin'ny tariby kilao isaky ny metatra, Newton isaka metatra, na koa kilao isaky ny tongotra. Rehefa ampifandraisina amin'ny fotoana famonoana ny tsela dia mivadika herinaratra avy hatrany izy io.
Ny motera elektrika dia misy hery manokana voafaritra ao amin'ny HP. Izy io koa dia manana haingam-pandeha ho an'ny vatan'ny output. Ireo toetra mampiavaka ny motera herinaratra, ny herinaratra ary ny hafainganana dia mamaritra ny tselatra azony omena. Ary ny toque dia manampy amin'ny famaritana raha hiodina ny entana na tsia.
Izy io dia mekanisma fandefasana ary misy andiana singa mekanika izay manome fihenam-bidy araka ny tokony ho izy ary mampitombo ihany koa ny fampitana torque. Ny entana rehetra amin'ity singa ity dia manan-danja. Mila geometry sy firafitra tonga lafatra izy io amin'ny fampandehanana tsara ny rafitra.
3. Famoronana haingam-pandeha
Alohan'ny handinihanao ny pitsopitsony amin'ny famolavolana reducers hafainganana dia tokony ho fantatrao ny momba ny serivisy izay manondro toe-javatra iray izay misy fiatraikany amin'ny ankapobeny na mampitombo ny fitakiana herin'ny boaty iray. Mety misy ifandraisany amin'ny vovoka sy ny hamandoana, ny habetsaky ny hovitrovitra hanoherana, na ny isan'ny tsingerin'ny fandidiana. Ny fihenan'ny herin'ny serivisy dia ny fananana fahalalana lalina momba ny fiasan'ny reducer ary koa ny fampivoarana ny rafitry ny rafitra fandefasana azy manontolo.
Ireto misy zavatra tena ilaina tokony ho fantatrao momba ny reducers hafainganana. Azonao atao ny mahita ny iray amin'ireo mpanamboatra ny reducer hafainganam-pandeha, reducer fitaovana kankana, fitaovana fiarandalamby, fitaovana traktera, boaty fiadiana amin'ny fambolena, sy maro hafa hividianana vokatra avo lenta amin'ny vidiny mirary.